TALOOYINKA UGU SARREEYA EE KU SAABSAN DARYEELKA IYO BEERAHA ISDABAJOOGA "NIKA" EE BEERTIISA - KU'SAABSAN
Miraha khudradda quruxda badani waxay keenaysaa dareen degdeg ah oo ay ku farxaan dhadhanka wanaagsan iyo dhadhanka macaan.
Mid ka mid ah kuwa ugu caansan waa noocyada kala duwan ee pears "Nika", dheeraad ah oo ku saabsan kaas oo aan ka wada hadli doonaa qodobkan.
Qeexida noocyo jajab ah "Nika"
Heerka dhirta dhirta "Nick" celcelis ahaan, iyo qiimaha kobcitaanka laftiisa - celceliska. Taajka geedka wuxuu ku wareegsan yahay qaab la yiraahdo laamo dhir ah oo adag. Caleemaha geedka noocyo kala duwan waa bunni midab leh oo leh midab siman. Wuxuu ka tagaa midabka cagaarka qaniga ah, oo leh jilcan dhalaalaya.
Miraha waa weyn ee size, miisaanka midhaha ah ee pear Nika gaaro 200 g. Midhaha ayaa ah qaab of conical qaabaysan. Maqaarka midhaha waa mid cufan oo dhexdhexaad ah, oo leh qaab qurux badan oo iftiin leh oo dhalaalaya, taas oo ay bixiso dufan yar.
Midabka midhaha wuxuu kala duwan yahay heerka qaangaadhka: tusaale ahaan, inta lagu jiro muddada bislaanshaha la kala saari karo, midabkiisu waa cagaar guduudan oo leh cagaar badan; inta lagu jiro bislaanshaha macaamiisha - casaan-huruud ah oo leh xad-dhaaf ah oo casaan leh tuubo jilicsan.
Miro ayaa lagu hayaa qaabka gaaban ee gaaban oo ku yaala jilitaan yar. Jidhku waa mid fiican, oo casiir leh, aan la granulated, oo leh dhadhan macaan iyo dhadhan wanaagsan.
Waxyaabaha kiimikada ee kala duwan ee "Nika":
tirada guud ee sonkorta - 10.2%;
Vitamin P - 122 mg / 100 g;
Vitamin C - 6.2 mg / 100 g;
maaddooyinka qalalan - 15.7%;
acids titrated - 0.40%.
Mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee kala duwanaanshuhu waa mid si xajmi leh oo caarad badan oo caleenta ah "Nika". Midhaha ugu horreysa ee geedku wuxuu muuqdaa 5-6 sano ka dib markii la beero.
Faa'iidada aan la ilaawi Karin ee loo yaqaan 'Nika pear' waa caabbinta barafka sare ee geedka, taas oo ka dhigaysa mid soo jiidasho leh oo ku soo kordhay dhammaan gobollada dalka. Xaqiiqo muhiim ah oo ku saleysan beerista geedkan midhaha leh waa gaadiidka wanaagsan ee Nederiiska Nick.
Ma taqaanaa? "Nika" waa mid si fiican loo soo celiyay xitaa kadib marka uu barafoobo ilaa -38 ° C, waxyeelladu waa 0.6 dhibcood.
Muuqaal kale oo wanaagsan oo ka mid ah noocyada kala duwan ee Nika pear waa caabbinta cudurada wanaagsan, iyo sidoo kale dhadhan macmacaan aad u sareysa.
Faa'iidooyinka kala duwan ee noocyadaasi aad bay uga yar yihiin mudnaanta oo iyaga ka mid ah, qayb ka mid ah is-bacriminta ee kala duwan, baahida loo qabo manjooyin joogto ah, iyo sidoo kale muddada gaabis ah ee Bisaylkiisa midhaha Nika pear.
Sida loo doorto seedling marka la iibsanayo
Badanaa waa inaan ku iibinnaa geedo miro ah oo ku yaalla dukaamada ama suuqyada ubaxa. Si geedo kala duwan ee pear "Nika" si aad u hesho xidid si fiican, waa lagama maarmaan in ay si sax ah u doortaan.
Waxa ugu horreeya ee aad u baahan tahay in aad fiiro gaar ah u tahay muuqaalka ah ee seedling: waa inay ahaato nadiif ah oo aan lahayn wax calaamado ah oo qallalan ama qalafsan.
Waa muhiim! Qoraal waa in lagu lifaaqaa seedling kasta oo macluumaad ah oo ku saabsan shirkadda dhalatada, noocyada, taranka iyo sharaxaadda aagga wanaagsan ee beerashada; haddii aysan jirin wax caynkaas ah, waxa fiican inaad diidid inaad iibsato sapling: waxaa ugu badan, waa tayada liita.
Geedo wanaagsan ayaa leh ugu yaraan shan xabbadood oo waaweyn iyo sedex xabbadood oo dheeraad ah oo leh dhererka ugu yaraan 30 cm. Xididdada geedo tayo leh waa inay ahaataa mid dhalaalaya, nadiif ah, aan lahayn koritaan, dhibco iyo calaamado kallana.
Way ka fiican tahay inaad soo iibsato geedo oo aan ka badnayn 2 sano, waa arrin sahlan in la ogaado sidan: Iyagu si buuxda uma dhicin taajkii.
Sida loo doorto oo loo diyaariyo meel loogu talagalay pear
Tayada iyo tirada dhirta la jeexay waxay ku xiran tahay xajmiga xeerarka agrotechnology ee kala duwan ee pear "Nika". Xeerarkan wuxuu ka bilaabmaa xulashada iyo diyaarinta meel loo beero pear.
Ma taqaanaa? Koofiyadu ma jecla inay "ka guurto meel" meel, oo markaa, markaad beerto geedo, waa lagama maarmaan in la doorto meesha ugu haboon si aanad dib ugu celinin geedka.
Qaar badan waxay tixgeliyaan in pear uu yahay warshad keli ah oo keliya, waxayna ku dadaalayaan inay hubiyaan in geedku korayo meel gebi ahaanba laga ilaaliyo dabaysha, sidaa daraadeed waxay geed udhigaan qolalka deyrta ama, iyadoo la tixgelinayo celceliska caanaha Nika, inta u dhaxaysa geedaha sare iyo tan ka weyn.
Tani waa khalad, sababtoo ah hooska koritaanka pear ah ayaa hoos u dhigi kara tayada beergooyska ayaa hoos u dhigi doona. Nafaqada noocyada "Nika" ayaa ugu fiican in la doorto meel wanaagsan oo iftiin leh, qorrax leh, oo si fiican u kulul.
Waxaa muhiim ah in pear ku koraa aagga oo bilaash ah, oo ballaadhan, sababtoo ah, iyada oo inkastoo qiyaasta celceliska geedka, waxay u baahan tahay meel aad u badan oo ah horumarin buuxda.
Ka hor inta aadan beerin pear, waxaad u baahan tahay inaad u diyaariso meel loogu talagalay. Bilaw inaad samayso tan toddobaad kaddib markaad degto. Dhexdhexaadkii godadka ee beertu waa inay ahaataa ugu yaraan 1 mitir, iyo qoto dheer - 70-80 cm.
Marka qodo dalool, waxaa wanaagsan inaad ka baxdo dhulka korkiisa: waxaa loo baahan yahay in laga beerto geedka, halka dhulka moolku uusan faa'iido lahayn. Ka hor inta aadan bilaabin geeddi-socodka beerashada, dhulka waxaa la quudin jiray Bacriminta potash-fosfate iyo arrinta organic ee saamiga saxda ah.
Bacriminta waxay ku xiran yihiin dhulka, qoday korka, oo waxay ku dhacaan hurdo god. Substrate Tani waxay ku shubtay xal lime ah oo biyo ah (2 koob oo 10 litir oo biyo ah). Foomkan, godka ayaa ku haray wiigii.
Waqtiga ugu wanaagsan ee geedo beerto wuxuu noqon doonaa dhamaadka bisha Sebtembar - bilowga Oktoobar (pear waxa uu yeelan doonaa waqti uu ku habboonaado oo helo xoog xoog leh kahor inta uusan qaboobin) ama dhammaadka Abriil - bilowga Maajo (ilaa caleemaha ay bilaabaan inay ubaxlaan).
Nika "Nika" waxaa ugu wanaagsan in la sameeyo labo qof oo la mid ah, sababtoo ah nidaamku waa mid sahlan, laakiin waxaad u baahan tahay inaad wax walba wax qabato.
Waa muhiim! Ka hor intaan la beeri, waxaa lagama maarmaan ah in la xareeyo dhererka qiyaasta mitir si ay si haboon u sameyso jirridda iyo taajka geed yar.
Sidaas, abuuro algorithm seedling:
Dhul dhulka ku qodb si aad u yar oo qoyan u samee;
Si aad u abuurto seedling iyo si tartiib ah, iyada oo aan waxyeello, toosin xididada;
Buuxi nidaamka asaasiga ah ee ciidda si qoorta xididkiisu u muuqato 4-6 cm;
Si tartiib ah dhulka ugu qulqulaya shinnida;
Ku shub bangi dhoobo ah oo ku wareegsan ceelka sidaa daraadeed geedkii lagu beeray gudaha godka, taas oo faa'iido u leh waraabinta;
Biyaha dhalidda leh 2-3 baaldiyo biyo;
Geedkii ee seedling waa in lagu xiraa ulaha leh xarig, isagoo mar hore ku duudduubay jilif leh caag ah si aan xadhigga u korin geedka;
Maalinta xigta, waxay ku turjumaan ciidda leh humus.
Haddii cimiladu ay qallalan tahay oo kulul tahay deyrka, dhalmada waxay u baahan tahay waraabinta 8-10 maalmood oo kasta.
Noocyada daryeelka ee noocyo ku'saabsan "Nika"
Daryeelidda pear "Nika" waxay ku lug leedahay waraabinta saxda ah, quudinta waqtigeeda, iyo sidoo kale manjooyin tayo sare leh oo geed ah. Haddii aad sameyso sax, waxaad heli doontaa qurxinta quruxda badan ee beertaada iyo macmacaanka delicious ee miiska.
Sida loo sameeyo "pear watering" Nika "
Geed gaar ah oo taxadar leh oo geedo badan oo u baahan tahay isla markiiba ka dib markii laga beerto. Geedka abuurista ayaa badanaa la waraabiyaa illaa xididada ay xididada u gudbaan ilaa dhamaadka. Xilliga xagaaga, geedka waxaa la waraabiyaa hal mar bishii.
Suurtagal maaha in biyaha si toos ah loogu shubo geedka hoostiisa, haddii kale xididada waa la maydhi doonaa lakulanka ayaa dhiman doona. Waxaa ka fiicnaan karta qashin yar oo ku wareegsan geedka agteeda oo ku shub biyo gogo 'boodhka. Si loo waraabiyo, waxaa wanaagsan inaad isticmaasho biyaha kulul ee loo kala soocay, sababtoo ah geed ayaa ka jiran kara biyo badan oo qabow.
Si looga fogaado samaynta hareeraha agagaarka geedka, ka dib markaad waraabiyo ciidda si fiican ayaa loo furfuray, marka lagu daro, iyada oo la raacayo nidaamkan, xididdadu waxay si fiican u neefsanayaan.
Maxaa iyo goorta la quudiyo isteroberi
Nidaamka asaasiga ah ee pear waa qarsoonaa qoto dheer, sidaas darteed quudinta Naasiga Nika badiyaa waa mid dabiici ah. Marka la beero, geedka waxaa la bacrimiyey markii ugu horeysay, keenaya bacriminta dabiiciga ah ee ceelka.
Quudinta soo socda ayaa la qabtaa xilliga dayrta. Inta lagu jiro muddadan, digada iyo compost waxaa loo isticmaalaa oo ay ku daboolaan ciidda agagaarka geedka.
Ma taqaanaa? Si aad u sii fara badan ee nafaqooyinka ku xidhan xididdada pear ku wareegsan, waxaad samayn kartaa godadka yar yar iyo ku shub xalalka bacriminta iyaga.
Guga iyo xagaaga, inta lagu jiro muddada koritaanka ugu firfircoon ee geedka, pear waxay u baahan tahay xaddi badan oo nitrogen ah, taas oo gacan ka geysta horumarinta unugyada geedka. Bishii Juun, walxaha potash iyo fosfooraska ayaa lagu dari karaa ciidda - tani waxay xoojinaysaa qoryaha.
Haddii ciidda agagaarkaaga ay tahay mid asiidh ah, mararka qaar waa lagama maarmaan in la quudiyo pear ayadoo ay ku jirto kalsiyum, ama lime ama dambas loo isticmaali karo bedel ahaan. Xalalka walxahan oo kale ah waxaa lagama maarmaan ah in lagu dhajiyo geed.
Cawska qori ee wax lagu qoro
Geedka ugu horeeya waxaa la sameeyaa marka geedku horey u jiray 1 sano jir. Waqtigan, geedaha yar yar ayaa la jajabiyaa habka ay u gaarto wax ka badan 50 cm ee dhererka. Tani waxay dhaqaajisaa koritaanka laanta hoose.
4-5 sano oo koritaan ah, taajkii pear waa la qalajiyey si loo hagaajiyo helitaanka iftiinka, laamaha gaaban yahay si loo siiyo taajka qaab qaab caadi ah.
Gooyo waa in la sameeyaa shay aad u fiiqan, "on ring," oo kaliya kuwa laamaha si qumman u koraya oo hooska intiisa kale waa in laga saaraa. Dhamaan meelaha la gooyo waa in la kariyaa beerta beerta ama macmacaanka gaarka ah.
Waa muhiim! Haddii aadan sameynin manjooyin waqtigiisii, caleemaha ayaa dhali doona, iyo miraha waxay si weyn u yareeyaan cabbirka.
Marka goosashada iyo sida loo kaydiyo goosashada ee kala duwan ee pear "Nika"
Kala sooc "Nika" waxaa loola jeedaa noocyada jiilaalka ee isteroberi iyo sababta ay u tahay mid aad u soo jiidasho leh beerashada beerta, inkastoo ay "dhalinyaradu." Waqtiga ugu fiicnaanta qaadashada miro waa dhamaadka bisha Sebtembar - bilowgii Oktoobar.
Waxaa muhiim ah in aan laga badinin pear-ka on geedka, si aysan u seexan hurdada oo si fiican loo hayo. Miro wanaagsan oo la soo ururiyey in la soo ururiyey muddada koritaanka ka saaran, midabka kaas oo cagaaran-brown.
Calaamad muhiim ah oo ah "diyaargarow" ee midhaha la goosto waa in si fudud looga soocayo asliga ah. Calaamad muujinaysa dareenka ayaa sidoo kale noqon doona midabaynta pear: haddii midhaha jilicsan yahay, lama kaydin doono.
Waxaa wanaagsan in aad is ilaaliso NIKA markaad booqasho qabow leh qoyaan badan. Weel khaas ah (waxaa fiican inaad isticmaasho sanduuqyada laga sameeyay alaabta dabiiciga ah) soo saar warqad ama xaraarad hoose, iyo dusha sare - miro ku yaal habab dareen ah ama garaac.
Inta lagu jiro kaydinta isteroberi, waxay lagama maarmaan tahay mararka qaarkood in ay "baaraan" miraha, iyo haddii aad dareentid kallana ama waxyeello, isteroberi waa in laga soo qaado sanduuqa caadiga ah.
Diyaarinta geedo yar yar jiilaalka
Inkastoo xaqiiqda ah in geedkii "Nika" uu yahay miro kulul, baradho yaryar waxay u baahan yihiin hoy. Dhammaadka Oktoobar, geedka waa in lagu daboolaa lakabka mulch, waxa uu "diirin doonaa" nidaamka xididka. Tani, caws, dhadday ama humus ayaa sameyn doona.
Iyada oo bilawga ah ee barafka, waxaad u baahan tahay inaad ku daboosho boogta pear leh agrotextile - dhar gaar ah oo si fiican u dhaafa qoyaanka iyo iftiinka, sidoo kale wuxuu leeyahay saamayn "kuleyl". Laga soo bilaabo kor, seedling waxay u baahan tahay in lagu daboolo barafka, iyo barafka badan oo aad dhigtay seedling (dabcan, ma ahan si aad u daboosho geedka leh top), waraabiyo pear noqon doonaa.
Haddii aadan haysan mashiinno, waxaad isticmaali kartaa laanta sirta. Caleemaha ugu da'da yar iyo kan ugu hooseeya ayaa lagu dari karaa dhulka, barafku wuxuu "hoy" noqon doonaa, tani waxay kordhin doontaa tayada iyo tirada dalagga.
Resistance of noocyo pear "Nika" si cuduro iyo cayayaanka
"Nika" waa mid aad u dhif ah xanuunsan, iyo haddii tallaabooyin ka hortag ah la qaado, markaa wax dhibaato ah ma jiri doonto.
Tallaabooyinka ka hortagga:
Waqtigaas si aad u samayso Bacriminta macdanta iyo arrinka organic, waxay ku caawin doontaa geedku in uu noqdo mid xoog badan oo si sahlan loo yareeyo cudurada suurtagalka ah.
Ha ku dhaafin ciidda, sababtoo ah bay'ad qoyan waxay ka qaybqaadataa horumarinta maadooyinka fungal.
Goynta iyo nadiifinta meel u dhow geedaha. Tani waxay badbaadin doontaa geedka fayraska iyo fangaska oo ku nool tuulooyinka caleemaha iyo caleemaha buka.
Nadiif ah lime oo geed ka ilaaliya cayayaanka.
Haddii aad hore u aragtay calaamadaha ugu horreeya ee cudurkan: dhibco iyo caleemaha caleemaha, dhaawaca caleemaha iyo kalyaha kelyaha, waa inaad ku daaweysaa geed leh fungicides oo ku celi daaweynta ka dib 7 maalmood.
Haddii aad ku aragto bloom cad ama shabaqa caarada gudaha gudaha caleen, pear waa in laguula dhaqmo cayayaanka. Sidoo kale in dagaalka ka dhanka ah cayayaanka ee marxaladaha ugu horeeya ayaa caawin doona xalka saabuun, waxay u baahan yihiin inay ku buufiyaan dhirta.
Sida aad ogtahay, pear wuxuu midho dhali karaa ilaa 100 sano. Nika "Nika" - oo aan qabyo ahayn oo aad u soo jiidasho leh si uu u koro geedkii beerta, sidaas darteed hadda waa inaad baratay xeerarka asaasiga ah ee geed soo kordhaya oo ku dhegaya, geedkiina wuu ku farxi doonaa sanado badan.